Kedu ihe mkpuchi ị chọrọ maka ecommerce gị? | ECommerce ozi ọma
José Ignacio | | eCommerce, Nche
Nchịkwa na ecommerce chọrọ usoro mkpuchi iji chebe ọdịmma nke ọrụ a na ntanetị. Ebe ọ bụ ihe dị ezigbo mkpa iji nwee ike mezuo njikere iji chebe, ọ bụghị naanị mmasị gị ọkachamara, kamakwa akụ gị na akụrụngwa IT. Ebe ihe kachasị mkpa bụ na ihe niile na-arụ ọrụ na mgbazi zuru oke.
Site na nke a n'ozuzu ya, ekwesịrị ịdebere na mkpuchi maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-abụkarị mkpuchi azụmahịa nke ebumnuche ya bụ iji kpuchido ogige ma ọ bụ ụlọ nkwakọba ihe, yana ngwongwo ma ọ bụ ngwaahịa tupu ihe egwu dị iche iche (ọkụ, izu ohi, mmebi eletriki, mmiri, wdg) yana ụgwọ obodo maka ụlọ na azụmaahịa ahụ n'onwe ya.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na azụmahịa gị n'ịntanetị enweghị ogige n'ihi na ị na-enye ọrụ ma ghara ire ngwaahịa, ihe a na-emebu bụ nkwekọrịta nkwekọrịta mkpuchi izugbe obodo nke na-ekpuchi ibu ọrụ obodo nke nrigbu, onye were gị n'ọrụ na ngwaahịa yana nchekwa iwu. nkwupụta ndị a.
Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ chee echiche maka ịtọlite ​​ya, ozi a dị mkpa. Ka o sina dị, ọ ga-enyere gị aka tinye ụlọ ahịa gị na ịntanetị n'ụzọ dị mfe na dị ka n'enweghị ihe ọ bụla maka ọdịmma gị
1 Insurance mkpuchi: nchebe ngwa ahịa
2 Inye mkpuchi IT
3 Ikpuchido ụlọ ọrụ
4 Ibu obodo
5 Insurance maka ndị ọrụ
6 Atụmatụ zuru ezu maka ndị ọkachamara
Insurance mkpuchi: nchebe ngwa ahịa
Ọnụ ego mkpuchi maka ụlọ ahịa gị n'ịntanetị ma ọ bụ azụmaahịa na-adabere na ma ị na-akwado mkpuchi ụlọ, ma ọ bụ naanị na-akwado mkpuchi obodo. Otu n'ime ihe ndị kachasị achọ bụ ihe a na-akpọ mkpuchi ịzụta, nke bụ iwu maka ụlọ ọrụ raara onwe ha nye ire ere ngwaahịa emechara ozugbo na onye na-azụ ya.
Ngwaahịa a nwere emegharị mkpuchi nye ụdị ntọala a. Nkwenye nke ndụmọdụ teknụzụ banyere ogo na nchekwa yana ịgbatị ibu ọrụ obodo, n'etiti ndị ọzọ, iji mezue nchebe gị na azụmaahịa ịntanetị gị chọrọ.
Ofkpụrụ ọzọ dị mkpa maka ụdị azụmaahịa a bụ nke njem ala. N’echiche na ọ na - enyere aka inweta nchekwa zuru oke, ma ị bụ onye na - ebu ụgbọ mmiri, onye na - ere ahịa, onye na - ebugharị ma ọ bụ onye na - ahazi ihe ngosi nka. N'otu aka ahụ, ọ na-enye usoro nke ebumnuche ya iji gboo mkpa nke ndị ahịa ahịa. Iwu a manyere ndị inshọransị ka ha gwa nke ọ bụla n'ime njem ha mere, na-eme ka ọnụego maka onye ọ bụla n'ime ha dabere na ngwa ahịa nke ngwaahịa ego a.
Inye mkpuchi IT
N'aka nke ọzọ, uru a dị mkpa dịkwa n'ime onyinye a. Ebe ndị ọrụ, freelancers na SMEs nwere ike ịdenye aha dị iche iche nke atumatu iji chekwaa arụmọrụ kwesịrị ekwesị nke ha kọmputa ma ọ bụ kọmputa Site na ngwaahịa ndị gunyere mkpuchi maka nrụzi, ntinye na nrụzi kọmputa, ọnwụ data na mmebi anụ ahụ na ihe mejupụtara ya na, nke etinyere maka laptọọpụ; n'agbanyeghị, agbanyeghị, ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike mgbe niile ịbanye ego mkpuchi ụlọ nke gụnyere mkpuchi iji gbazie adịghị ike enwere ike n'iji kọmputa, yana ọrụ enyemaka kọmputa.
Varidị ọzọ dị iche iche ndị ọrụ nwekwara ike ịdenye aha bụ amụma iji kwado mkpuchi akụrụngwa eletriki maka ndị ọkachamara na nkeonwe eji arụnyere n'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs na ndị ezubere maka ndị nwere mmasi ịchekwa ha, maka ndị ọkachamara na nkeonwe. Typedị mkpuchi a n'ozuzu na-ekpuchi sekit dị mkpirikpi na ihe ndị ọzọ na-akpata eletriki (overvoltage, induction ma ọ bụ mkpuchi mkpuchi adịghị mma), ntụpọ mmanu, ọdịda nzukọ na ịrụ ọrụ na-adịghị mma, n'etiti ndị kachasị.
Ọ na-ekpuchikwa mmebi ndị dị na mpụga dịka ọkụ, mgbawa ọkụ, ọkụ ọgbụgba ọkụ kpọmkwem, ohi na ihe ndị ọzọ na -emepụta ụwa, na mgbakwunye ndị ọzọ. Site na ha, anyị na-amalite site na nkwekọ bụ isi nke na-emetụta mmebi akụrụngwa na nhọrọ ndị ọzọ na-ezo aka na mbibi nke ndị na-ebu mpụga na mmụba nke ụgwọ ọrụ ahụ nwere ike kpatara. A na-agbakọ ọnụahịa nke ụdị mkpuchi a dabere na njirimara nke akụrụngwa eletriki, afọ ya na iji ya rụọ ọrụ n'ime ụlọ, ọfịs ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọkachamara.
Ikpuchido ụlọ ọrụ
Maka nhazi ya, ọ ga-adị mma ka ị mata iwu ịchọrọ ịme nkwekọrịta, ebe ọ nwere ike ịgụnye mkpuchi nke onye nwe office ọ naghị atụgharị uche inshọransị, ma ọ bụ n'ihi na ọ chọghị ya ma ọ bụ maka na ọ naghị akwụghachi ya ego, yabụ ụfọdụ ndị inshọransị na-ahọrọ ibupute mkpuchi "à la carte" n'ahịa, na-ahaziri onwe ha maka ọdịmma nke onye ọ bụla nwe ya.
A ghaghị ịchọ mkpuchi nke na-echebe ihe dị iche iche nke ọfịs ọ bụla nwere nkwa, yabụ, dịka ọmụmaatụ, ndị dị n'ala ala ga-enwerịrị, n'etiti ihe mgbagha, ndị sitere na ọdachi ihu igwe (idei mmiri, ọkpọkọ ọkpọkọ, wdg), na ya enweghị ike imetụta ogige dị na osisi chọrọ mkpa ndị ọzọ.
Site na okike ha, klaasị usoro iwu a dabara adaba maka ndị ọkachamara ma ọ bụ ndị ọrụ onwe ha nwere mkpa dị ngwa iji kpuchido ohere ha na ihe niile dị n'ime ya, yabụ enwere ike ịgbatị ha n'ọfịs ọkachamara.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ mkpuchi arụpụtala mkpuchi mkpuchi izugbe izugbe, mkpuchi zuru oke n'ihi ọdịiche dị iche na obosara nke mkpuchi ya yana mgbanwe iji kwado mkpa nke ụlọ ọrụ ọ bụla. Ihe mkpuchi CR a na-ekwe nkwa oke nchebe megide nkwupụta nke ndị ọzọ na mpaghara ọ bụla, gụnyere ọkachamara, egwuregwu na oge ezumike.
N'echiche a, Nnukwu mkpuchi mkpuchi obodo Ọ ga - eme ka ụlọ ọrụ gị nwee ike ịga n’ihu na - arụ ọrụ akụ na ụba mgbe ọ tara ahụhụ site n’aka ndị ọzọ maka ụgwọ sitere na ọrụ, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ a rụrụ. Tụkwasị na nke a, ọ ga-enye gị ohere kachasị dị elu nke nkwa iji kwekọọ na mkpa gị.
Na ebumnuche na ndị njikwa ya enweghị ike izere ohere ịme ihe ọ bụla nke na-etinye akụ azụmaahịa ma ọ bụ na-akpata ọghọm nke ndị ọzọ. Maka nke a, ọ dị ezigbo mma na n'ime mpaghara dijitalụ enwere ike ịhazi ụkpụrụ nke njirimara ndị a. Iji mee ka ndị njikwa na ndị nchịkwa na-enye nchebe pụọ na mmebi nke ndị ọzọ.
N'ime mkpuchi ndị a na - enye site na ngwaahịa mkpuchi a bụ ụfọdụ dị mkpa dịka ndị anyị ga - egosi gị n'okpuru:
Ọrụ obodo maka ndị inshọransị
Ndị enyemaka ọhụrụ
Nchebe na-ekwu mmetọ
Ndozigharị nke ọha na eze
Iwu nchịkwa na ntaramahụhụ
Ibu oru obodo na onye guzobere ya
Mgbe n'aka nke ọzọ, a na-akpọ Multi-n'ihe ize ndụ ụlọ ọrụ mkpuchi na-nyeere na e mere nke mere na ọ dịghị ihe mere na-akpata kwụsị ọrụ gị. Lọ ọrụ ọ bụla nwere nsogbu ụfọdụ ọ dabara adaba ịmara.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, hapụ anyị nọmba ekwentị gị na otu onye ndụmọdụ anyị ga-akpọtụrụ gị iji nye gị ozi niile ịchọrọ.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ọnọdụ ndị kachasị dị mkpa na mkpuchi ihe egwu dị iche iche nke ụlọ ọrụ mkpuchi dị iche iche mepụtara, otu n'ime ihe ndị a pụtara:
Ọkụ ụgbọ ala
Nnọchi Ebu na faịlụ
Ohi ma ọ bụ izu ohi
Insurance maka ndị ọrụ
Ọ bụ ezie n'ụdị ngwaahịa mkpuchi a ọ dị mma ka ha bute ya n'otu n'otu (mkpuchi ezumike nka, ụgwọ kwa ụbọchị ma ọ bụ ọrịa), enwerekwa ohere ụfọdụ ndị ụlọ ọrụ mkpuchi na-enye ha n'aka nke ndị ahịa ha site na "mkpọ”Insurer nke kpuchie ihe niile ekwuru na mbu. Agbanyeghi na ọnụego ha zuru ụwa ọnụ dị elu, enwere ike ị nweta nchekwa karịa karịa ma ọ bụrụ na ha na-eme nkwekọrịta otu otu, na iche, ọbụlagodi site na ọtụtụ ndị mkpuchi.
Emebeghị atụmatụ a ugbu a na onyinye dị ugbu a, mana ị nwere ike ịhọrọ mgbe niile maka ihe mkpuchi mkpuchi nke na-ezute njirimara ndị a (ma ọ bụ ihe yiri ya) ma nke ahụ bụ ndị isi na-anabata ndị ọrụ onwe ha, ndị n'aka nke ọzọ bụ ndị nwere emezighị emezi kasịnụ Ha ga-anata ụdịrị elele dị iche iche nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma, ya mere, ndị kachasị nwee mmetụta ịnata ọrụ ahụike na mmekọrịta ndị a.
Atụmatụ zuru ezu maka ndị ọkachamara
Uzo ozo nke ndi oru aka ha iji chebe ihe ndi ha choro bu site na uzo zuru oke nke atukwasiri ndi mmadu ji aka ha, ndi ha nwere ike kwughachi ego ha furu efu ma obu ezumike ezumike. Ọ nwekwara ike butere iji hụ na ezumike ọrịa ma ọ bụ ihe mberede, ma si otú ahụ belata mmefu ndị nke a gụnyere, ndị ọrụ onwe ha na-anata ụgwọ n’oge ha na-anọ n’enweghị ọrụ. Otu uru ị ga-aga na mkpuchi mkpuchi a bụ na ịnwere ike ịdenye aha gị mkpuchi mkpuchi ahụike, yana nkwa nke ụlọ ọgwụ maka ebumnuche ọ bụla.
Site na ego gị, ị na-ewepụ ihe egwu nke ị ghara inweta ego gị mgbe niile n'ihi ezumike ọrịa, wee chebe akụ gị na nke ezinụlọ gị niile site na ịmecha ego Social Security. Ọ na-enye ohere ịnweta ụgwọ kwa ụbọchị nke nwere ike ịdị n'etiti ihe dị ka euro 20 na 50, yana ịnweta ọrụ ọhụụ ma ọ bụ uru ahụike na-enweghị ụgwọ ọzọ nye ndị na-ejide ha na, na ụfọdụ atụmatụ zuru oke, ọbụlagodi ohere ịnweta usoro iwu ekwentị ọrụ na nduzi ahụike na-akwụghị ụgwọ ọ bụla. N'ime ihe emebere dịka mkpuchi mkpuchi maka ụlọ ọrụ ntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Kedu ihe mkpuchi ị chọrọ maka ecommerce gị?
Mmetụta nke COVID-19 na azụmahịa kọmputa